FJKM Ambohidroa: fiderana lehibe amin’ny “Alahadin’ny mpitandrina” | NewsMada
Hanakoako ny fiderana an’Andriamanitra, eny amin’ny FJKM Ambohidroa Antehiroka, ny alahady izao, noho izany fotoana izany natokana ho “Alahadin’ny mpitandrina”. Hiavaka amin’ny fotoana rehetra tokoa io satria hanasana tarika roa mpanao hira filazantsara, samy fanta-daza: ny tarika Laurent Rakotomamonjy sy ny tarika Vonjy.
Hanomboka amin’ny 8 ora sy sasany maraina ny fotoana, hosantarina amin’ny fotoam-pivavahana lehibe, ao amin’ny fiangonana FJKM Ambohidroa Antehiroka, amin’ny “Alahadin’ny mpitandrina”. Ny tolakandro, manomboka amin’ny 2 ora kosa, ny fampisehoana ara-pilazantsara iarahana amin’ny tarika Laurent Rakotomamonjy sy ny tarika Vonjy.
Araka izany, samy hanao ny hira efa nahalalan’ny maro azy ireo hatramn’izay ny roa tonta amin’io. Nambaran’ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny fiangonana FJKM Ambohibao Antehiroka fa io ny andro iray lehibe hitrotroana am-bavaka ny mpitandrina sy ny ankohonany amin’ny adidy masina iantsorohany. Hanasana ny zanaka am-pielezana miparitaka manerana ny Nosy ity fotoan-dehibe ity.